Hadii aad Micnahaan fahamtid qosolka ayaa kaa dhamaan doona-Akhriso wacdaraha | Gaaloos.com
Home » galmada » Hadii aad Micnahaan fahamtid qosolka ayaa kaa dhamaan doona-Akhriso wacdaraha
Hadii aad Micnahaan fahamtid qosolka ayaa kaa dhamaan doona-Akhriso wacdaraha
Inaad adigoon u dan lahayn wacdo Lambar Telfoon waxay mar mar keentaa inuu kaa qabto Qofkii Telfoonka watay oo yara dhibsada Wicitaankaas ula-jeed la’aanta ah. Waxaase tan ka duwan kana halis badan arrinta ku dhacday Laba Wiil oo Ameerikaan ah.
Wiilashan ayaa Tefloon ay si Qaldan u weceen iyagoo aan waliba ka war heyn wuxuu u horseeday inay Xabsiga galaan.
Shabakadda ABC ee Wararka faafisa oo Mareykanka ku taala ayaa sheegtay in Wiilashan oo Xatooyo ku howlanaa, uu Midkood isagoo aan ogayn si lama filaan ah u garaacay Lambarka Booliska ee Xaaladaha Deg dega ah loogu tala galay.
Mid ka mida Xubnaha Booliska ayaa Telfoonkii qabtay, wuxuuna weydiiyay soo wicihii Su’aal ahayd “ Maxay tahay Xaaladda Deg dega ah eek u heysa?”..
Hase yeeshee Qofkii Telfoonka soo wacay ayaa ka aamusay inuu jawaabo, balse Telfoonkii oo Hawada ku jira ayuu ka tagay, sidaas ayeeyna Xaruntii Booliska ee lasoo wacay ku dhagaysatay Labadan Wiil oo ka sheekeysanaya inay doonayaan Maan-dooriye.
Nathin Teklimrim iyo Carson Raynhart ayaa lagu kala magacaabaa Wiilashan, Midka dambena Da’diisu waa 20 jr.
Waqti kooban ka dib ayeey Wiilashii isku sheegeen inay isku dayayaan inay xoog ku galaan Gaari . midkood ayaana kii kale ka dalbaday inuu Musmaar iyo Burus u keeno hadii uu u baahdo.
Qofkii Xarunta Wicitaanka ee Booliska joogay oo wali dhagaysanaya Codadkooda ayaa durbadiiba maqlay Dhawaqa Muraayad la jabinayo, iyadoo markaa ka dibna Wiilashii Labada ahaa ay qaylo bilaabeen, markii ay heleen Kaniiniyo.
Geba-gebadii Howshoodana, waxaa ku yimid Booliska oo Goobta soo gaaray, halkaas oo baaritaano laga sameeyay si Labada Wiil ee Dhaca geeystay loo helo.
Macluumaad uu bixiyay Qofkii qabashada Telfoonka Deg-dega ah ee Booliska fadhiyay ayaa lagusoo baadi goobay Wilashan oo iyagu isku dayay inay Raadadkooda qariyaan, Baabuurkiina joojiyaan.
Labadooda oo la qabtay ayaa dafiray inay wax dambi ah geeysteen, balse markii Gaarigoodii la baaray ayeey Boolisku heleen Alaab lasoo xaday.
Booliska ayaa hakiyay Wiilasha, kuna eedeeyay inay ku lug leeyihiin Xatooyo, Shirqool iyo heysashada Alaab lasoo dhacay.
Title: Hadii aad Micnahaan fahamtid qosolka ayaa kaa dhamaan doona-Akhriso wacdaraha